Martech Zone »Nnyocha, Chọpụta, Mụta Azụmaahịa na Teknụzụ Azụmaahịa
Martech Zone - Azụ ahia
Ịgụ Oge: 2 nkeji Ọnwụ dị egwu nke Mpozi Tolbert, 34, ka ndị ọrụ gọọmentị Indiana na-enyocha iji chọpụta ma ọ bụ ma ọ bụ na enweghi mmebi iwu OSHA. Ahụtụbeghị m Maazị Tolbert mgbe m na-arụ ọrụ na The Star, mana ọ nọ na igwe mbuli ugboro ole na ole na nwa nwoke a dị nro. Echetara m na ọ tụrụ ụjọ ya ga-ewere ọkara igwe mbugo! Onye ọ bụla sitere na ụlọ akwụkwọ akụkọ ahụ ga-amụmụ ọnụ ọchị ma kwuo hi mgbe ọ nọ gburugburu. Agụla m na a maara Mpozi
Ịgụ Oge: 3 nkeji Mmetụta Digg bụ nke a na-atụlekarị. Ọtụtụ mmadụ na-akwagide ịme Digg, mana ọ bụ n'ezie usoro dị ukwuu iji nweta ọgụgụ akwụkwọ? Nke a bụ ihe mere mgbe saịtị m bụ 'Dugg'.
Ịgụ Oge: 2 nkeji Seth na-ajụ nnukwu ajụjụ nke na-abụkarị esemokwu maka ndị njikwa ngwaahịa nke Software. You na-eji Intuition ma ọ bụ Nyocha? Echiche m na nke a bụ na ị bụ ihe siri ike nke abụọ. Mgbe m na-eche banyere nyocha, m na-eche banyere data. O nwere ike ịbụ data gbasara asọmpi, ojiji, nzaghachi, akụrụngwa na nrụpụta. Nsogbu bụ na nyocha dabere kpamkpam n'akụkọ ihe mere eme, ọ bụghị ihe ọhụrụ na ọdịnihu. Mgbe
Ịgụ Oge: 3 nkeji Emechara m ịgụ Freakonomics. O teela oge m ga-edobe akwụkwọ azụmahịa. Azụrụ m akwụkwọ a n'abalị Satọdee ma bido ịgụ ya na Sọnde. Emechara m ya na nkeji ole na ole gara aga. Ekwetara m na ọ na-ewe ụfọdụ ụtụtụ, na-eme ka m ghara ịga ọrụ n’oge. Isi akwụkwọ a bụ echiche pụrụ iche nke Steven D. Levitt na-ewere mgbe ọ na-enyocha ọnọdụ. Ihe m kọrọ
Jiri nlezianya eji Email Marketing
Ịgụ Oge: 2 nkeji Ana m anata email kwa izu ma ọ bụ abụọ (amaghị m nke ọma n'ihi na m na-ehichapụ ha) site na Inside INdiana Business na Gerry Dick. Ihe ngosi a lekwasịrị anya n’azụmahịa na Mpaghara Indianapolis. Ihe ngosi a mara ezigbo mma ma, n’oge gara aga, akwụkwọ akụkọ na-enye ihe ọmụma n’ezie. Agbanyeghị, mmadụ kpebiri ebe ahụ na ebe ọ bụ na ha bụkarị onye na-ahụ anya, nke ahụ bụ etu ha ga-esi zipu ozi ịntanetị ha ugbu a. Nke a bụ ihe nzuzu
← Nke gara aga 1 ... 1,010 1,011 1,012 ... 1,021 Ọzọ →
Page 1011 nke 1021